:Bọchị: Disemba 4, 2019
Iyla Site na inyefe usoro ụgbọ oloko, nke abụọ a na-eme atụmatụ ịnapụta ọnwa a, ọnụọgụ ndị njem GMT kwa ụbọchị site na 22 ruo puku ga-abawanye na 2020 puku na 30 na 2021 puku na 40. Üretim Production na Germany [More ...]
Mahadum Istanbul ga - akpọta ndị ọrụ agụmakwụkwọ; Edere isiokwu ndị metụtara Iwu a 2547, nke edepụtara na Official Gazette nke 12.06.2018, n'ime ngalaba ndị a na Mahadum Istanbul. [More ...]
A ga-eweghachi ndị otu 2547 dị ka isiokwu ndị metụtara Iwu Iwu Elu Dị elu na Iwu maka Nkwalite na Nhoputa nke Ndị Otu. Ndi akwukwo, 68 Civil Servants Iwu 657. [More ...]
Mahadum Bursa Uludağ ga-enweta ndị ọrụ agụmakwụkwọ; Site na ntinye aka nke Iwu Elu Ulo-akwukwo gupuru 2547 na ukpuru enyere n'iwu nke iwu a, mkpebi ndi Senate nke Mahadum anyi bu nke emere. [More ...]
Turkey Kol Iwu Iwu Nke 399 n'okpuru contractual okwa n'ọrụ injinia na-eme. Dabere na nsonaazụ edere ede na ọnụ a na-ekwupụta, oke na ntozu nke ndị ọrụ injinịa ga-arụ ọrụ ka ekwuputara na mgbasa ozi. Ngwa mara ọkwa [More ...]
Ministri nke oru ugbo na oke ohia eweputala ọkwa ohuru nke onye obula. Ozi nke Ọrụ Ugbo na Ọhịa 25 November na 09 Disemba 2019 ndị ọrụ na-ewe ndị ọrụ [More ...]
8, nke nọ na klas Ọrụ Nchịkwa Izugbe ga - arụ ọrụ na thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njikwa na oflọ Ọrụ nke Akụ na Ego. ịzụrụ onye ọrụ njikwa ego nke 15 Trainee na njigide mkpara onye na-ere ahịa Trainee ” [More ...]
Hospitallọ ọgwụ Mahadum Yozgat Bozok ma ọ bụ ndị ọzọ ka Rectorate họpụtara, 2018 Year KPSS (otu B) dabere na ọkwa, 657 / B isiokwu 4 / 06 / 06 dere na 1978 / 7 ọnụ BKK [More ...]
Iwu 657 maka ndị oru nkịtị. Ederede X (edemede B) nke 4 nke ụbọchị 06.06.1978 ma gbakwunye na Iwu Iwu 7 / 15754 [More ...]
Onye isi oche ndị isi okpukpe na nzukọ ọgbakọ; ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ egosipụtara na tebụl na ndabere nke 2018 na 2019 KPSS isi maka ndị ọrụ klas ha, aha ha, ọkwa agụmakwụkwọ na ọnụọgụ ha ka enyere n'okpuru. [More ...]
Iji were gị n'ọrụ oge niile na Ngalaba Na-ahụ Maka Nlekọta Ihe Ọmụma na Mahadum Marmara, meli Nkwekọrịta na Ngalaba Nhazi Ozi Nnukwu nke Publiclọ Ọrụ Ọha na Ọha E Bipụtara na Official Gazette Nke 31 / 12 / 2008 [More ...]
Ndozigharị na Iwu Ohu Ndị Ọrụ Civil nke 657 ka belọikpe Kacha Elu wee rụọ ọrụ. Ederede X (B) nke edemede 4 / 06 / 06 ụbọchị na 1978 / 7 Council of Minister Iwu [More ...]
Courtlọ ikpe nke Akaụntụ ga-ewere ndị ọrụ zụrụ azụ. Dabere na ọkwa ahụ edepụtara na DPB, oflọikpe nke Akaụntụ ga-akpọrọ ndị ọrụ n'etiti 29 November na 16 Disemba 2019. A ga-eweba ndị ọrụ n’ọrụ, TCA [More ...]
Mahadum Tokat Gaziosmanpaşa 2547 gụrụ Iwu Iwu na Nchịkwa agụmakwụkwọ ka elu maka nkwalite na ntinye nke ndị ọrụ agụmakwụkwọ na 94 dabere na ntinye akwụkwọ na ụkpụrụ nke Ndị Ọrụ maka Mahadum ngalaba nke Mahadum Tokat Gaziosmanpaşa. [More ...]